၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆုကို အကယ်ဒမီများရှင် ဦးငြိမ်းမင်းက ကြေညာပေးခဲ့ရာ ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ခင်မောင်ဦး၊ စိုးသိမ်းထွဋ်က ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆုကို ဘိုကလေးတင့်အောင်က ကြေညာပေးခဲ့ရာ အငိုမျက်လုံး အပြုံးမျက်နှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် မြန်မာပြည် ကျောက်စိမ်းက ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု- ဦးမြင့်ခိုင်က ပင်လယ်ထက်ကနေ၀န်းနီ ဇာတ်ကားဖြင့်ရရှိသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆုကို အကယ်ဒမီ မေသဉ္ဇာဦးက ကြေညာပေးခဲ့ရာ အမေ့ကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ဝါဝါအောင်က ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ဆုကို အကယ်ဒမီ ရဲအောင်က ကြေညာပေးခဲ့ရာ ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ဝေဠုကျော်က ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို အကယ်ဒမီများရှင် မို့မို့မြင့်အောင်က ကြေညာပေးခဲ့ရာ အာဒံရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် သက်မွန်မြင့်က ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် ဓာတ်ပုံဆုကို ဦးမြင့်သိန်းဖေက ကြေညာပေးခဲ့ရာ ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ပန်းချီစိုးမိုးက ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆုကို အကယ်ဒမီဆုများရှင် ရန်အောင်က ကြေညာပေးခဲ့ရာ အာဒံရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ပြေတီဦးက ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ စင်ရော်မောင်မောင်က ကြေညာပေးခဲ့ရာ ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ခင်မောင်ဦး၊ စိုးသိန်းထွဋ်က ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုကို ရီမြင့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဦးဇော်မြင့်က ကြေညာပေးခဲ့ရာ အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒဿရယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ဆွတ်ခူး ရရှိသွားသည်။
Posted by linnzawhtike at 2/07/2012
နှလုံးခုန်မှုကို Password အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် က...
အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျနော်ဘာလို့ မုန်းသလဲ [သွန်းနေစိုး...
ရွှေတိဂုံစေတီတော်(နှစ်၂၆၀၀ ပြည်. အမှတ်တရ)
မြန်မာ ရှေးဟောင်း သတင်းစာများ (၂)
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၏ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတချိူ.
အားဒေါလ်ဖ် ဟစ်တလာ (Adolf Hitler)